Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. यस्तो कम्पनी जहाँ कर्मचारीले आफ्नो तलब तथा सुविधा आफैं तोक्छन् – Emountain TV
एजेन्सी, ८ असोज । यो दुनियाँमा हामीले देखेका जानेका कम्पनीहरु सबैले कर्मचारीको तलब तथा सुविधा आफैं तोक्दछन् । अर्थात् कर्मचारी वा कामदारलाई आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार हुँदैन, भलै तलब भत्ताका लागि सौदावाजी गर्न सक्दछन् ।
तर यो दुनियाँमा एउटा यस्तो कम्पनी पनि रहेछ जहाँ काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नो तलब आफ्नै तोक्ने गर्दछन् । आफूलाई मन लाग्दा आफ्नो तलब आफैं बढाउन पनि सक्दा रहेछन् ।
उक्त कम्पनीको नाम ग्रान्ट ट्री लिमिटेड हो । बेलायतको राजधानी लण्डनमा यो कम्पनी रहेको छ । विभिन्न व्यावसायिक फर्महरुलाई सरकारी कोष दिलाउनका लागि यो कम्पनीले सहयोग गर्दछ । उक्त कम्पनीमा काम गर्ने एक महिला कर्मचारीले हालै आफ्नो तलब आफैं बढाइन् । पहिले उनको तलब वार्षिक ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो भने अहिले झण्डै ५३ लाख रुपैयाँ भएको छ ।
बीबीसीको रिपोर्ट अनुसार २५ वर्षकी सिसिलिया मन्डुकाले आफ्नो तलब आफैं वार्षिक झण्डै साढे ९ लाख रुपैयाँले बढाइन् ।
आफ्नै तलब बढाउन पाउँदा कसले नबढाउला र ? तर मन्डुकाले भने आफ्नो तलब बढाउँदा धेरै कुरा सोचिन् । आफ्नो काममा परिवर्तन आएको र आफ्नो कामको लक्ष्य भन्दा पनि धेरै उपलब्धि हासिल गरेको आधारमा उनले तलब बढाउने निर्णय गरेकी हुन् ।
यो कम्पनीमा कर्मचारीहरुले आफ्नो तलब आफै बढाउनु अघि आफ्ना सहकर्मीहरुसँग तलब वृद्धिको प्रस्ताव राख्नु पर्दछ । साथीहरुले त्यस्तो प्रस्तावको समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो कम्पनीमा ४५ कर्मचारी काम गर्दछन् । सबैलाई आफ्नो तलब तोक्न तथा घटबढ गराउने अधिकार छ ।
परिवारका ११ सदस्य, आपसमा २३ पटक बिहे
२४ घण्टे ड्युटी, बिहे गर्न केटी नपाएपछि सिपाहीले दिए राजीनामा
किन पहेँलो रङको हुन्छ जेसीबी डोजर ?
लामखुट्टे नमारौं, रगत चुस्न दिऔं !
पिताको शवलाई परिक्रमा गरी छोराले बिहे गरे
अदालतको अनौठो आदेश, २० किलो चामल दिएर पत्नीसँग ‘डिभोर्स’